ခရစ္စတလ်ရဲ့ ဘဝစာမျက်နှာ ...။: November 2010
Bliss of Us (ပုံမှန်က ဒီဆိုဒ်လေးပါ)
ဆိုဒ်လေးကို ဝင်ရလို့ ပျော်သွားပြီ (30-Nov-2010)
ဝင်လို့မရတော့ ဒီလို ဖြစ်နေတယ်။
လောလောဆယ် ဒါလေးကို ကလစ်ပေးပါနော်။
ဆိုဒ်ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရတာအခက်ခဲဖြစ်မှုအတွက် အထူးတောင်းပန်ပါတယ်နော်။
လောလောဆယ်မှာ အလုပ်တွေများလို့ အာရုံတွေများနေရတဲ့အချိန်၊
မမျှော်လင့်ပဲ ဒီနေ့မနက် အလုပ်ဆိုဒ်ကို ပြင်ဆင်နေတုန်း
ဗြုန်းးးးးးးးးးးးး ဆို ဒိုမိန်းထဲ ဝင်လို့ မရတော့ပါဘူး။
hosting ကြောင့်လည်း မဟုတ်။
ဒိုမိန်း သက်တမ်းပြည့်ဖို့လည်း လိုသေး။
နောက်ဆုံးတော့ ဆာဗာ server ပြဿနာပါတဲ့။
ဒါကြောင့် crystal ရဲ့ အလုပ်ဆိုဒ်ကို ကြည့်လိုပါလျှင်
လောလောဆယ်မှာ blog ကိုသာ ဝင်ကြည့်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားထားလိုက်ပါပြီ။
Bliss of Us ဆိုဒ်လေးကို လိုအပ်လို့ပဲ ကြည့်ကြည့်
လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြသော ပရိသတ်အားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
(p.s - ဒီဇင်ဘာလမှာ မအားလပ်မှုများကြောင့် ပိုစ့် မတင်နိုင်တော့ခြင်းကို တောင်းပန်ပါရစေနော်။ နှစ်သစ်ကူးမှာတော့ ပိုစ့်ပြန်တင်ဖို့ ကြိုးစားပါအုံးမယ်။
“နှစ်သစ်မှာ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ ကြိုတင်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်”
တိတ်တဆိတ် လာရောက်လည်ပတ်ကြသော ခင်မင်ရတဲ့ မိတ်ဆွေတို့ကို
Posted by Crystal at 4:30 PM6comments
နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကို အထွဋ်အမြတ်ထားကြတယ်၊ အလေးထားဦးညွတ်ရလောက်အောင်လည်း ထိုင်ဘုရင်မင်းမြတ်ရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေက ထိုင်းပြည်သူတင်မက မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ပါ အကျိုးရှိစေတယ်မဟုတ်လား။
ဒီလောက်များတဲ့ သပိတ်တွေထဲကို အလှူငွေ အကြွေစေ့လေးတွေ လိုက်ထည့်လှူကြတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက ရွှေတိဂုံစေတီတော်ရင်ပြင်မှ ပဋ္ဌာန်း (၂၄)ပစ္စည်း သောက်တော်ရေအိုးလေးတွေကို စီတန်းသောက်ကြတာကို သတိရမိသေး။
သံဃာတော်များလည်း ပွဲတော်မှာ ပါဝင်ကူညီပေးနေကြပါတယ်။
လောကီအပျော်အပါးကိစ္စတွေမှာ သာသနာ့ဝန်ထမ်းတွေ ပါဝင်နေတာ မကောင်းဘူးလို့ သူတို့က မယူဆကြပါဘူး။ ပစ္စည်းလေးပါးအလှူရှင် ကျေးဇူးရှင်ဒကာဒကာမတို့ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှု ဝမ်းနည်းမှု အရေးတို့သည် သာသနာ့ဝန်ထမ်းတွေ အနေနဲ့ တာဝန်မကင်းဘူးလို့ ယူဆကြပါသတဲ့။ ဒါ့အပြင် သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေးတွေမှာပါ သာသနာ့ဝန်ထမ်းရဟန်းတော်များ၏ သြဇာသက်ရောက်မှုရှိနေကြပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းထဲ ဟိုငေး ဒီငေးနဲ့ လျှောက်လိုက်၊ ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်၊ စပ်စုလိုက်ပေါ့။ မြန်မာနိုင်ငံက ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေနဲ့ မတူထူးခြားမှုတွေကိုလည်း လိုက်လေ့လာမိပါတယ်။ သူတို့ဘာတွေလုပ်ကြသလဲ၊ ဘာတွေ ရွတ်ကြသလဲပေါ့။
လက်ထဲမှာ မီးကြာခွက်တစ်ဖက် ကင်မရာက တစ်ဖက်နဲ့ ကိုးရို့ကားရာနဲ့။ မီးမျှောဖို့ ရေစပ်ကို လာကြည့်တော့ လူအုပ်က များလွန်းတာကြောင့် (ရေစပ်က မတော် ပြုတ်ကျသွားရင် ခက်မယ်) အမြင့်တစ်နေရာမှ ကြိုးနဲ့ချကာ စနစ်သစ်နဲ့ မီးမျှောလိုက်ပါတယ်။ ကဗျာဆန်ဆန် ရေစပ်မှာ မျှောလိုသော်လည်း စိတ်လျော့ပြီး စနစ်သစ်နဲ့ မျှောကြည့်တော့လည်း ပျော်စရာပါလားနော်။ အမှန်တော့ မီးမျှောပွဲတော်ဆင်နွှဲလိုတဲ့ ဆန္ဒပြင်းပြရခြင်းက ကျမရဲ့ ဖေဖေက ရွှေကျင်သားလေ၊ ဒီတော့ကား သမီးလုပ်သူကလည်း ဒါမျိုးလေး ဆင်နွှဲလိုတာ မထူးဆန်းပါဘူးနော်။
မီးကြာခွက်လေးကို ရေထဲမမျှောခင် ဘေးနားက ထိုင်းလူငယ်လေးတွေ စပ်စုမိသေးတယ်။ တချို့က စာရွက်လေးနဲ့ ရွတ်ကြတယ်၊ ချစ်သူစုံတွဲတွေက နှစ်ဦးသား ဆုတွေတောင်းပြီး လှူကြတယ်။ လိုက်ပို့ပေးတဲ့ ညီမငယ်က အစ်မလည်း ဆုတောင်းလို့ဆိုတယ်၊ ဘာဆုတောင်းရမလဲလို့ မေးတော့ ကိုယ်လိုချင်တာ ဆုတောင်းရတယ်ဆိုပဲ။ ကျမအမြင်ကတော့ မြတ်စွာဘုရားကို ဆီမီးနဲ့ ပူဇော်ကန်တော့တာပဲ ထင်တာ သူပြောပြတော့မှ ယတြာချေတဲ့ ပုံစံတွေရော၊ မြစ်စောင့်နတ်ပူဇော်တာတွေရော ယုံကြည်မှုမျိုးစုံနဲ့ ပြုလုပ်ကြတယ်ဆိုတာ သိလာခဲ့ရပါတယ်။
အချို့ကလည်း ဗျောက်အိုးလေးတွေ ထည့်လိုက်ကျတယ်၊ တချို့က မီးပန်းလေးတွေထည့်ကြတယ်။ ရေလယ်မှာ ပန်းနဲ့ မီးပန်းကိုပါ ထည့်မျှောလိုက်တော့ ပိုပြီး ကြည့်ကောင်းတာပေါ့။ ဒါလေးတွေ လိုက်ကြည့်နေရတာကိုက ပျော်စရာ၊ကြည်နူးစရာပါ။ ဆုတောင်းဖို့တောင် မေ့နေပါတယ်။
crystal ရဲ့ မီးကြာခွက်လေးကို ဒီလိုလေး မျှောဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။
ညပိုင်းသိပ်မိုးမချုပ်ခင် အခန်းကို ပြန်ခဲ့လိုက်တယ်၊ အင်းးးးးဟိုးးးးးးးလွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်လောက်က တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ညမှာ ပြည့်ဝန်းနေတဲ့ လမင်းကြီးကို ထွက်ကြည့်ခိုင်းခဲ့တဲ့ ကျမရဲ့ ကျေးဇူးရှင်ကို သတိရနေမိသေးတယ်။ သူသာပါလာရင် ကျမတို့ အေးအေးဆေးဆေး လမ်းလေးလျှောက်ပြီး ဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်ကြည့်ဖြစ်မှာသေချာပါတယ်။ အခုတော့ အလုပ်ကိစ္စတွေလည်း ညပိုင်းမှာ ချိန်းထာတာတွေလည်းရှိတာမို့ စိတ်လျော့ပြီး အခန်းကို ပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ ဆေးပေါင်းခတဲ့ညမှာ အုန်းစိမ်းရည်ကို တစ်ဝကြီး သောက်ပစ်လိုက်တယ်၊ လွမ်းလွမ်းနဲ့ပေါ့။
ဆောင်းရာသီ (20-နိုဝင်ဘာ-2010)နေ့ရဲ့ မင်္ဂလာညနေခင်းလေးတစ်ခုဝယ် လက်ထပ်ပွဲကျင်းပချိန် ခန်းမအပြင်ဘက်၌ မင်္ဂလာမိုးတွေ ရွာသွန်းဖြိုးလို့။ မင်္ဂလာနေ့ရက်မှာ အေးချမ်းတာ ကောင်းလေစွ။
crystal ထိုင်းနိုင်ငံကို ဒုတိယအကြိမ် ရောက်စဉ်မှ အစပြုလို့ ယခုချိန်အထိ ကျမတို့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ အလုပ်ကိစ္စများကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသော မင်္ဂလာသတို့သားနှင့် ခင်မင်ရပါသော မင်္ဂလာသတို့သမီးတို့ သက်ဆုံးတိုင် မေတ္တာခိုင်မြဲစွာဖြင့် အိမ်ထောင်သည်ဘဝလေးကို တည်ဆောက်နိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
မင်္ဂလာလက်ဆောင်များ လက်ခံရာနေရာမှ ပန်းများ
“လက်ထပ်ပွဲ အသိသက်သေများ လက်မှတ်ထိုးရန်”
“မင်္ဂလာဦးဇနီးမောင်နှံအတွက် ဆုံးမစကား မှတ်သားကြစဉ်”
“ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့ ဘဝကို အတူလက်တွဲ ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ကြမယ်”
“မိန်းကလေး တစ်ဦး၏ နုပျိုတဲ့ အရွယ်၊ အေးချမ်းတဲ့ မျက်နှာ၊ ရွှင်ကြည်တဲ့ အပြုံး၊ အကြင်နာ မျက်ဝန်း”
မင်္ဂလာဆောင် တစ်ခုလုံးမှာ သူမလေးရဲ့ အပြစ်ကင်းတဲ့ အပြုံးလေးကို အမှတ်တရ ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမတော့ သူမက မသိပါ၊ နောက်တော့ သိသွားပြီး ပိုစ့်ပေးလိုက်သေး အဟိ၊ ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တဲ့ ကောင်မလေးပါ။ အတိတ်ကုသိုလ်ကံ ဖြူစင်ခဲ့လေသလားကွယ်....။
p.s - crystal ဓာတ်ပုံကတော့ မမြင်ရလေ ပိုကောင်းလေမို့ မတင်တော့ဘူး :P
Posted by Crystal at 8:47 PM2comments
မိသားစုတစ်ခုမှာ အဖေက အေးချမ်းတဲ့ အရိပ်ကို ပေးပြီး၊ အမေကတော့ မိသားစုရဲ့ သူရဲကောင်းဆိုရင် မှားမယ်မထင်ဘူးနော်။ အမေဆိုတာ မိသားစုရဲ့ အခရာလည်းဖြစ်၊ မိသားစုဝင်တွေဖြစ်တဲ့ အဖေအပါအဝင် သားသမီးတွေရှေ့က မားမားမတ်မတ် သတ္တိရှိစွာရင်ဆိုင်ကြတာ သတ္တဝါတိုင်းရဲ့ အမေတိုင်းပင်မဟုတ်ပါလား။ ဘယ်လိုအန္တရာယ်တွေပဲ ကြုံရ ကြုံရ အမေတွေ အသက်ပေးသွားတာ၊ အနစ်ခံမှုတွေများစွာကို လုပ်နိုင်တာ အမေ ပါ၊ အသိဥာဏ်ရှိသော လူသားများပင်မက တိရစ္ဆာန်များမှာပါ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ မိဘတို့ရဲ့ ကျေးဇူး၊ အမေတို့ရဲ့ အသက်စွန့် မွေးပေးတဲ့ ကျေးဇူးတွေ ပြောလို့မကုန်တာ အထူးပြောဖို့ပင်လိုမယ်မထင်ပါလေ။
အမေတို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံ၊ အမြှော်အမြင်၊ စဉ်းစားဥာဏ်များနဲ့ သားသမီးများကို ထိန်းကျောင်းပဲ့ပြင်လို့ ချော့တစ်ခါ၊ ခြောက်တလှဲ့နဲ့ပေါ့။ အမေတွေက သားသမီးတွေကို “ပြောမယုံ၊ ကြုံမှသိ”ဆိုတဲ့ စကားလေးအတိုင်း လွတ်မထားတတ်ကြဘူးလေ၊ ကိုယ်တွေ့ကြုံလိုက်လို့ ကိုယ်ကျိုးနဲမှာ စိုးသပေါ့။ မရေတွက်နိုင်တဲ့ မေတ္တာတွေနဲ့ တည်ဆောက်ပေးထားတာဆိုတော့ သားသမီးတွေ ထိခိုက်မယ်ဆိုရင် ဖေါ်မပြနိုင်တဲ့ ဝေဒနာတွေက သားသမီးတွေ ခံစားရတာထက်ကို ပိုလို့ ခံစားထိခိုက်စေကြတာလေ၊ ဒါ အမေ မဟုတ်လား။
ကရုပ်လေးဟာ အမေဗိုက်ထဲမှာတုန်းက ငြိမ်ငြိမ်လေး အိပ်ပျော်လွန်နေလို့ ဆရာဝန်တွေက မွေးဖွားချိန်ကျော်တာတောင် ကရုပ်လေးက လူ့လောကထဲ ရောက်မလာသေးတာကြောင့် ခွဲစိတ်ပြီး မွေးဖွားလိုက်ကြပါတယ်။ အမေဟာ သတ္တိရှိရှိပဲ ခွဲစိတ်မွေးဖွားပေးတာကို လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ အမေပြောနေကြ စကားတစ်ခွန်းကတော့ သားသမီးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် မိခင်တွေမှာ မမြင်နိုင်တဲ့ ဇောအဟုန်တစ်ခုရှိနေပါသတဲ့။ သားသမီးဇော။ ဇောက အားကို ဖြစ်စေပြီး မိခင်ရဲ့ ရင်မှာ မေတ္တာနဲ့ အတူ သတ္တိတွေက ဝင်ရောက်ကိန်းနေတာမို့ အမေတွေဟာ သားသမီးတွေရဲ့ သူရဲကောင်း ကရုဏာရှင်များ ဖြစ်ကြတာပေါ့။ ဒါကြောင့် ဘဝရဲ့ နာကျင်မှုတွေ ခံစားရမှာစိုးလို့ ကရုပ်လေးရဲ့ အမေက ကရုပ်လေးကို ကြိုတင်မှာကြားထားတာတွေ အများကြီးပေါ့။ အခုလို အမေနဲ့ ဝေးနေတဲ့ အချိန်ကာလရောက်လာတော့ အမေ မှာကြားတာတွေ နားထဲမှာ တဝဲလည်လည်နဲ့ပါ။ ကျမ တုံး-လွန်း အ-လွန်းတဲ့အခါတွေမှာလည်း သူများ ပြောတိုင်းမယုံနဲ့ နင့်ကို သူများက ရောင်းစားသွားမယ်တဲ့။ အဲ ဒီလိုပြောတဲ့အခါ ကရုပ်လေး ပြန်ပြောလိုက်တာက “သမီးက ချိန်ခွင်ပေါ်မတက်ပါဘူး”။ ဒီစကားလေးက ကျမတို့ မိသားစုမှာ အခုချိန်ထိ ကျမကို နောက်လို့ မဆုံးနိုင်အောင်ပဲ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အမေ ဆိုတော့လည်း အစစအရာရာ ဒေါင့်စေ့အောင် မှာတတ်၊ မြင်တတ် တွေးပူတတ်သူ အမြော်အမြင်ကြီးသူ။ ဒါကြောင့် အမေ ပြောတာတွေကို အလေးအနက်ထား ယုံကြည်တယ်လေ။ ဘဝမှာ ယုံကြည်စရာကောင်းတာ အမေပဲမဟုတ်လား။
မိဘတွေက သားသမီးတွေအပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာတရားတွေကို ကျမတို့ သားသမီးတွေက ကောင်းမွန်သော ကျေးဇူးသိတတ်ခြင်းများနဲ့ ပြန်လည်တုံ့ပြန်ကြရမယ်မဟုတ်လား။ ဒီတော့ကား အမေ မှာတဲ့အတိုင်း လိုက်နာကြတာ လမ်းမှားကိုလည်း မရောက်စေတဲ့အပြင် လူထုကို အကျိုးပြုခြင်းတွေ၊ ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းမွန်ခြင်းတွေ၊ မိသားစု စည်းလုံးညီညတ်ခြင်းတွေစတဲ့ ကောင်းမွန်သောလုပ်ရပ်များနဲ့ မိဘတွေနဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့အခါ ကြိုဆိုကြစို့လားနော်။ ဒါမှ အမေ အမောပြေမှာပါ။
ဒါနဲ့ စကားမစပ် အမေ မှာကြားထားတာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အမေလည်း နှစ်သက်၊ အစားဂျီးများတဲ့ ကရုပ်လေးလည်း ကြိုက်တဲ့ မုန့်ဟင်းခါင်းချက်လေးကို အမေ မှာတဲ့အတိုင်း ချက်ကြည့်မယ်လို့ စိတ်ကူးပါတယ်။ ထမင်းနဲ့ ဟင်းတွေသာ ချက်တတ်တဲ့ ကရုပ်လေးက မုန့်လုပ်နည်းတွေ တစ်ခုမှ မလုပ်တတ်ပါဘူး။ အိမ်မှာဆို အမေကပဲ ပင်တိုင်လုပ်နေကြဆိုတော့ ကရုပ်လေးကိုယ်တိုင် အစ အဆုံးလုပ်တာဆိုလို့ တစ်ခါမှ မရှိသေးပါဘူး။ တစ်နေ့တော့ ရန်ကုန်က မုန့်ဟင်းခါးမျိုးချက်စားချင်တာနဲ့ အမေ့ကို မုန့်ဟင်းချက်နည်း ရေးပေးဖို့ လှမ်းပြီး ပူဆာရပါတော့တယ်။ ရန်ကုန်မုန့်ဟင်းခါးလို့ ပြောရတဲ့အကြောင်းကတော့ ကရုပ်လေးက နယ်စုံ မှ မုန့်ဟင်းခါးမျိုးစုံ၊ ချက်နည်းမျိုးစုံနဲ့ ချက်ထားတာကို စားဖူးလို့ မုန့်ဟင်းခါးတွေထဲမှာမှ ကန့်သတ်ချက်နဲ့ နာမည်တတ်လိုက်ရတာပါ။ ဟိုတလောလေးက အသိတစ်ယောက်အိမ်မှာ မုန့်ဟင်းခါးချက်တယ်ဆိုတော့ စားဖို့လည်း ဖိတ်ထားတယ်၊ အယ် စားပစ်လိုက်မယ်ဆိုပြီး သွားတော့ ကိုယ့်အကြိုက် ချက်နည်းနဲ့ ချက်ထားတာ မဟုတ်လေတော့ မြိုမကျခဲ့ဘူး။
အမေ ရေးပေးလိုက်တဲ့ မုန့်ဟင်းခါးချက်နည်းလေးကို အမှတ်တရအဖြစ် မှတ်သားထားလိုက်ပါတယ်။ ကရုပ်လေးလိုပဲ မုန့်ဟင်းခါးချက်စားချင်သူတွေ အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ကိုယ့်အကြိုက်၊ ကရုပ်လေးအမေ ချက်ကျွေးတဲ့ မုန့်ဟင်းခါးလို့ နာမည်တပ်လိုက်မယ်နော်။ အမေကလည်း ရန်ကုန်သူမဟုတ်တော့ ရန်ကုန်မုန့်ဟင်းခါးလို့တော့ နာမည်မတပ်တော့ပါဘူး။
“ကရုပ်လေးတို့ အိမ်က ချက်တဲ့ အလှူမုန့်ဟင်းခါး”
၁) မုန့် (၁-ပိဿာ)
၂) ငါးခူ (ဆယ့်ငါးကျပ်သား သို့မဟုတ် နှစ်ဆယ်သား)
၃) ဆီ (နှစ်ဆယ့်ငါးကျပ်သား)
၄) ဆန် အကျက်မှုန့် အနည်းငယ်
၅) ပဲအစိမ်းမှုန့် မထည့်လည်း ရပါတယ်။
၆) ကုလားပဲ (ငါးကျပ်သား)
၇) ကြက်သွန်နီအကြော် (ကြက်သွန်နီ အနေတော်အရွယ် နှစ်ဆယ်သား)
၈) ကြက်သွန်နီ အသေး (ဆယ့်ငါးကျပ်သား)
၉) ကြက်သွန်ဖြူ (တစ်ဆယ်သား)
၁၁) ဆနွင်း အနည်းငယ်
၁၂) စပါးလင် (သုံးပင်)
၁၃) ငံပြာရည် (နှစ်ဆယ်သား)
၁၄) ဆားအနည်းငယ် (ပေါ့ငံ မြည်းကြည့်ပြီးထည့်ရန်)
၁၅) ငှက်ပျောတုံး အရင်းပိုင်း တစ်ထွာခန့်
၁၆) ဘဲဥ ငါးလုံး (ပြုတ်ထားပြီး) ပါးပါးလှီးထည့်ရန်
၁၇) နံနံပင်၊ ပဲသီးတောင့် အနည်းငယ်စီ
၁၈) ငြုပ်ပွတောင့် ငါးတောင့် သို့မဟုတ် အစိမ်းမှုန့် သုံး၊လေးဇွန်း
၁၉) နှစ်သက်ရာအကြော် (ပဲကြော်၊ ဘူးသီးကြော်၊ ကြက်သွန်ကြော်)
ငှက်ပျောပင် အမှေးများကို ခွာပြီး ဆနွင်းရည်တွင် စိမ်ထားပါ။ ပါးပါးလှီးပြီး ဆနွင်းရည်တွင် စိမ်ထားခြင်းဖြင့် ငှက်ပျောအူ မမဲစေပါ။ ပြီးနောက် ရေထည့်၍ မီးဖိုတွင် ပြုတ်ပါ။
ငါးများကို ရေစင်အောင်ဆေးပြီး ဆား၊ ဆနွင်းနှင့် နယ်ပြီးနောက် ခဏထားပါ။ ဆားဆနွင်းနယ်ထားသော ငါးကို ငါးပြုတ်မည့်အိုးထဲသို့ စပါးလင်များ၊ ငြုပ်ပွတောင့်များနဲ့ အတူထည့်ပါ။ ရေအနည်းငယ်နှင့် ငံပြာရည်အနည်းငယ်ထည့်၍ ပြုတ်ပါ။ ငါးပြုတ်သည် တအားနူးရန်မလိုပါ။ ငါးပြုတ်ကျက်လျှင် ချကာ အအေးခံပြီး ငါးပြုတ်ကို အရိုးထွင်ပါ။ အရိုးများကို ရေဖြင့် ပြန်လည်ပြုတ်ထားပါ။ အရိုးတွေသန့်စင်ပြီး ငါးပြုတ်ရည်ယူထားရပါမယ်။
စပါးလင်ကို အရင်းပိုင်းပါးပါးလှီးပြီး ကြိတ်စက်မှာ ထည့်ကြိတ်ပါ။ ဂျင်း၊ ကြည်သွန်ဖြူများကိုလည်း ကြိတ်ထားပါ။
ကြက်သွန်နီအနေတော်အရွယ်များကို ပါးပါးလှီးပြီး ကြက်သွန်ကြော် ကြော်ထားပါ။ ဆီအိုးထဲမှ ကြက်သွန်နီကြော်များ ထုတ်ပြီး ထိုဆီကို ငရုပ်သီးမှုန့်နှင့် ကြက်သွန်ဖြူထည့်ပါ မွှေးလာရင် ငါးအသားများထည့်ပြီး ဆီသတ်ပါ။ ငါးဆီသတ်အနံ့မွှေးလာရင်တော့ ဂျင်း၊ စပါးလင်များကို ထည့်နိုင်ပါပြီ၊ အိုးထဲတွင် အားလုံးကို မွှေပါ။ ကုလားပဲကိုတော့ ညထဲက ရေစိမ်ထားမယ်ဆိုရင် မနက်ပိုင်းချက်ချိန်မှာ နူးနေမှာဖြစ်လို့ ပြုတ်တဲ့အခါ အချိန်ကြာကြာပြုတ်စရာမလိုတော့ပါ။ ကုလားပဲပြုတ်ပြီးသားကို ဇကာနဲ့ တိုက်ပါ။
ငါးအရိုးပြုတ်ရည်တွေကို မီးဖိုပေါ်တင်ထားချိန်မှာ ဆန်မှုန့်များကို ရေနဲ့ ဖျော်ပြီး ငါးပြုတ်ရည်ဆူလာလျှင် ထည့်နိုင်ပါတယ်၊ တဖန် အရည်များ ဆူလာသည်အထိ မွှေပေးရပါမယ်။ အရည်တွေ ပျစ်ပြီး ခဲသွားတတ်လို့ပါ။ ဟင်းအိုးဆူလာပြီဆိုရင် ကုလားပဲတိုက်စစ်ထားတာကို ထည့်ပေးရပါမယ်။ ထုထားတဲ့ စပါးလင်များကိုလည်း ချည်ပြီး စည်းပြီး ဟင်းအိုးထဲသို့ ထည့်ပါ။ ငှက်ပျောပင်ဖတ်များ ပြုတ်ပြီးသားဖြစ်လို့ ရေတော်တော်ဆူပြီးချိန်မှ ထည့်လည်း ရပါတယ်။ ကြက်သွန်နီဥလေးတွေကတော့ နောက်ဆုံးမှ ထည့်ရပါမယ်။ ဟင်းရည်ကို မုန့်နဲ့ စားဖို့ အနေတော်ထည့်ပြီးနောက် ဟင်းရည် တစ်လက်မခန့် ကျသွားသည့်တိုင် မီးဖိုပေါ်တွင် ဆူအောင်တည်ရပါမယ်။ ဟင်းရည် အမှုပ်များသေသည်အထိ တည်ထားပြီး လှီးထားတဲ့ ဘဲဥဖတ်လေးတွေ ထည့်ပြီး အပေါ့အငံမြည့်းနိုင်ပါတယ်။ ဟင်းရည်လည်း မွှေးလာပြီ ကြက်သွန်ဥလေးတွေလည်း ကျက်ပြီဆိုရင်တော့ “မီးငယ်လေး စားနိုင်ပါပြီ”လို့ အမေက စာထဲမှာ ရေးထားပါတယ်။ အမေ ဆက်ရေးထားတာက သူလာမှ ချက်ကျွေးမယ်တဲ့ သမီးပင်ပန်းနေမှာစိုးလို့တဲ့လေ။ အော် အမေ...။
“ မိန်းမသားဘဝမှာ မိခင်ဖြစ်ခွင့်ရတာ အမြတ်ဆုံးပါ၊
အမေတိုင်းရဲ့ မေတ္တာကို လေးစားဂါရဝပြုပါတယ်။”
Posted by Crystal at 8:43 PM7comments
Labels: For life notes..., လူထုအရေး
“7-Eleven ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဟင်” နိုင်ငံခြားရောက်စက ကျမရဲ့ အမျိုးသားကို မေးဖူးတယ်။ ဝီကီမှာ ရှာတွေ့တာလေး ကူးယူဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဘာလိုလိုနဲ့ ရောက်မယ့် အမှတ်သညာတစ်ခုအတွက် crystalသည်လည်း နိုင်ငံသားတစ်ယောက်၊ တိုင်းရင်းသားပြည်သူတစ်ယောက် ဖြစ်တာကြောင့် တာဝန်ရှိတယ်မဟုတ်လား ဒီတော့...
7-Eleven, primarily operating asafranchise, is the world's largest operator, franchisor and licensor of convenience stores with more than 39,000 outlets, surpassing the previous record-holder McDonald's Corporation in 2007 by approximately 1,000 retail stores. The US subsidiary of the Japanese firm has its headquarters in the One Arts Plaza building in Downtown Dallas, Texas. Its stores are located in eighteen countries, with its largest markets being Japan, the United States, Canada, the Philippines, Hong Kong, Taiwan, Malaysia and Thailand. Onaper-capita basis, Norway for example has one 7-11 for every 47,000 Norwegians, versus Canada which has one for every 74,000 Canadians, and North Korea, which has no 7-11s.
The company has its origins in 1927 in Dallas, Texas, USA, when an employee of Southland Ice Company, Joe C. Thompson, started selling milk, eggs and bread from an ice dock. The original location was an improvised storefront at Southland Ice Company, an ice-manufacturing plant owned by John Jefferson Green. Although small grocery stores and general merchandisers were present in the immediate area, the manager of the ice plant, Joe C. Thompson, discovered that selling convenience items such as bread and milk was popular due to the ice's ability to preserve the items. This significantly cut back on need to travel long distances to the grocery stores for basic items. Joe C. Thompson eventually bought the Southland Ice Company and turned it into Southland Corporation which oversaw several locations which opened up in the Dallas area. Initially, these stores were open from7a.m. to 11 p.m., hours unprecedented in their length, hence the name. The company began to use the 7-Eleven name in 1946. By 1952, 7-Eleven opened its 100th store. It was incorporated as Southland Corporation in 1961.
In 1962, 7-Eleven first experimented witha24-hour schedule in Austin, Texas. By 1963, 24-hour stores were established in Las Vegas, Fort Worth, and Dallas.
In the 1980s, the company ran into financial difficulties, selling off its ice division, and was rescued from bankruptcy by Ito-Yokado, its largest franchisee. In 1987, John Philp Thompson, the CEO of 7-Eleven, completeda$5.2 billion management buyout of the company his father had founded. The buyout suffered from the 1987 stock market crash and after failing initially to raise high yield debt financing, the company was required to offeraportion of the company's stock as an inducement to invest in the company's bonds.
The Japanese company gainedacontrolling share of 7-Eleven in 1991, during the Japanese asset bubble of the early 1990s. Ito-Yokado formed Seven & I Holdings Co. and 7-Eleven became its subsidiary in 2005. In 2007, Seven & I Holdings announced they would be expanding their American operations, with an additional 1,000 7-Eleven stores in the U.S.
ကရုပ်လေးရဲ့ အဘွားမှာ သားလို ချစ်တဲ့ တူနှစ်ယောက်နဲ့ သားအရင်းတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သားအရင်းကတော့ စက်မှုထုတ်ကုန်က ညွှန်ကြားရေးမှုးကြီးပေါ့၊ ဟိုခေတ်တုန်းကတော့ တကယ်အရည်အချင်းရှိတဲ့ ပြည်သူတွေထဲက ပညာရှင်တွေက ညွှန်ကြားရေးမှုးကြီးတွေပေါ့။ အဲ အဘွားရဲ့ တူသားနှစ်ယောက်မှာ တစ်ယောက်က လယ်ဧကများစွာကို ပိုင်ဆိုင်သော တောင်သူဦးကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး၊ နောက်တူတစ်ယောက်ကတော့ ယူနီဖောင်းအပြည့်အစုံ၊ ညိုမောင်းသော အသားအရည်၊ အရပ်မြင့်မြင့်မားမားကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ပြည်သူရဲ့ ရန်ကို ရွပ်ရွပ်ချွံချွံကာကွယ်ပေးတဲ့ စစ်တပ်မှ အရာရှိကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကရုပ်လေးတို့ ဆွေမျိုးတွေထဲမှာ ဓလေ့လေးတစ်ခုရှိတယ်။ အမျိုးထဲက လူကြီးသူမအိမ်ကို သွားတဲ့အခါ ရောက်ရောက်ချင်း ဦးထုပ်၊ ထီးတွေကို ဘေးချလို့ လက်အုပ်ချီမိုး ရှိခိုးပြီးမှ စကားပြောကြပါတယ်။ ပြန်တဲ့အခါလည်း ဒီလိုပါပဲ အမေ ပြန်လိုက်ပါအုံးမယ်၊ အဘွားပြန်လိုက်ပါအုံးမယ်ဆိုပြီး ထိုင်ရှိခိုးပြီးမှ ပြန်ကြတဲ့ ချစ်စရာ ကြည်နူးစရာဓလေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဒေါ်ကို အမေလို့ပဲ ခေါ်တဲ့ တူးသားအရာရှိကြီးက စစ်ထွက်မသွားခင် အမြဲအိမ်ကို လာကန်တော့တတ်တယ်။ အဘွား ပန်းခြံထဲ ပန်းတွေ ဆင်းပြီး ရေလောင်းနေလဲ မြေပေါ်မှာ ဦးချလို့ ကန်တော့တယ်။ ပြန်လာတိုင်းလည်း အမေ ကျွန်တော်ရောက်ပြီနော်၊ တိုက်ပွဲအကြောင်း သူနေကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း အမြဲဝင်ပြော ဦးတိုက်ပြီးမှ သူ့အိမ်ကို ပြန်လေ့ရှိပါတယ်။
နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များက ပညာသင်ကြားလာပြီး မြန်မာနိုင်ငံက စက်ရုံတွေလည်ပတ်နိုင်ရေး၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေကို အမြဲစစ်ဆေးပေး၊ သုတေသနလုပ်ပေးနေရတဲ့ သားအရင်းဖြစ်တဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှုးသည်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပင် အမေကို လာရောက်ကန်တော့လေ့ရှိပါတယ်။
လယ်ဧကများစွာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ တူသားသည်လည်း ဝါဝင် ဝါထွက် လယ်ယာထွက်ကုန်မှန်သမျှ အဘွားအိမ်ကို မရောက်တာမရှိအောင်ပင် ပေးပို့ကန်တော့ကြလေသည်။
ဒီလိုတွေ လာရောက်ကန်တော့တိုင်း အဘွားဆုပေးတာက မတူပေ။ စစ်သားကြီး ဘဘနဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှုးကြီး ဘဘတို့ကို ကျန်းမာ ချမ်းသာပြီး ဘုန်းကြီးလို့ အသက်ရှည်ပါစေ၊ ပြီးတော့ မင်းခစား ကမ်းနားသစ်ပင်တဲ့ဟဲ့ သတိ ဝီရိယနဲ့နေကြတဲ့။ တောင်သူလယ်သမားကြီး ဘဘ ကိုတော့ ကျန်းမာ ချမ်းသာပြီး ဘုန်းကြီးလို့ အသက်ရှည်ပါစေ၊ ပြီးတော့ ညောင်သီးလည်း စား၊ လေးသံလည်း နားထောင်တဲ့။ အဘွား ဘာကိုဆိုလိုသလဲ ကရုပ်လေး မသိခဲ့ပါ။
အချိန်ကာလတွေ ကုန်လွန်သွားကာ ခေတ်တွေပြောင်း စနစ်တွေပြောင်းလာတော့ ပြည်သူချစ်သော၊ ကရုပ်လေး အလွန်ပင် လေးစားအားကျခဲ့ဖူးသော ဘဘစစ်သားကြီးသည်လည်း ပင်စင်ယူလေပြီ။ (၁၉၈၈)ခုနှစ် အဘွား ရန်ကုန်မှာ ကရုပ်လေးတို့နဲ့ လာနေတော့ တိုင်းပြည်အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်။ ဒီအချိန်မှာ ဘဘစစ်သားကြီးက ရန်ကုန်ကို အပြေးအလွှားလာပြီး အဘွားကို လာကြည့်ပါတယ်။ စိတ်ပူတာကိုး။ အဲ သူမြင်သွား တွေ့သွားတာတွေ နောက်ပိုင်းမှာတော့။ သူအိမ်ပြန်ရောက် ယူနီဖောင်းနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေကို ဖြုတ်လို့ ရှက်တယ်လို့ ဆိုရှာတယ်။ ငါကိုယ်တိုင် မြင်ခဲ့တာ ယုံကို မယုံချင်ပါဘူးလို့ သူ့အမျိုးသမီးကို ပြောခဲ့သတဲ့။ နောက်လာနောက်သားတွေ ထမင်းငတ်ရင်ငတ်သွားပါစေ၊ ဒီလိုစနစ်မျိုးနဲ့ ငါတို့တစ်မျိုးလုံး စစ်ထဲမဝင်ရ။ ကဲ အခုတော့ ဘဘလည်း ဆုံးရှာပါပြီ။ သေတာတောင် နာမည်ရှေ့မှာ ဂုဏ်ပုဒ်တွေမတပ်ရလို့ ပြောသွားသေးတယ်။
ဟော ပညာရှင် ဘဘညွှန်ကြားရေးမှုးကြီးကတော့ ခေတ်တွေ စနစ်တွေ ပြောင်းသွားတော့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို သာမန် စက်ရုံမှုးဘဝနဲ့ နေရာရွေ့၊ စိတ်ပျက် အလုပ်ထွက်အောင် ကံကြမ္မာဖန်လာပြန်တယ်။ ကိုင်း ဒီတော့ နားအေးချင်တော့ ကျောပူပဲ ခံတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ လက်ရှိအခြေအနေတွေကို အားလုံးရုပ်သိမ်းလိုက်လေတော့ နေစရာတောင် ဒဂုံမြောက်မှာ အိမ်လေးတစ်လုံးရထားလို့ ဒါလေးပဲ ကျန်ခဲ့တယ်။
လယ်သမားကြီးတစ်ယောက်ပဲ အေးအေးနေရမလားမှတ်တယ် ပိုက်လိုင်းလုပ်ဖို့ မြောင်းဖောက်ရာမှာ လယ်တွေ မလွတ်လို့ ဧကသုံးဆယ်ဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။ အော် အဘွားပေးတဲ့ ဆုတောင်းကို သတိရနေမိတယ်။ ကရုပ်လေး ကြီးလာတော့မှ အဘွားရဲ့ စကားကို သဘောပေါက်မိတယ်။ ရှေးလူကြီးစကားများ တယ်မှန်သကိုး။
ကဲဒီတော့ ရှေ့လာမယ့် အနာဂတ်တွေမှာ 7-Eleven လိုပဲ ပြည်သူတွေအတွက် ဆိုင်တိုင်းမှာ ပစ္စည်းမှန် ဈေးမှန်နဲ့ ဝယ်သူတွေအတွက် လက်တကမ်းတိုင်းမှာ အဆင်ပြေစွာ လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်အောင် ဝန်ဆောင်မှုတွေ ဆောင်ရွက်ထားသလိုပဲ 7-11 နေ့သည်လည်း နောင်လာမယ့် နေ့ရက်တွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်သူတွေ ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ၊ နုလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေ၊ ကောင်းသော အပြောင်းအလဲတိုးတက်မှုတွေဖြစ်လာစေမယ့် သမိုင်းတွင်မယ့်နေ့ရက် တစ်ခုဖြစ်ပါစေသောဝ်။
Posted by Crystal at 10:00 PM5comments
တောင်ပေါ်လမ်းတွေဆိုတာ ချောက်ကမ်းပါးနဲ့ လမ်းနဲ့က ဒီလိုကပ်ကပ်လေးတွေပါ။
“ခမ်းရေ အစ်မတို့ လမ်းမှားသွာပြီလား ကြည့်ပါအုံး ရွာလည်း မတွေ့ဘူး”ညည်းတွားမိတော့၊ ခမ်းက “လမ်းတော့ မမှားဘူး အစ်မ၊ ဒီနားမှာ ခဏနေခဲ့နော် တောင်ပေါ်ဆက်တက်ပြီး သွားကြည့်လိုက်အုံးမယ်၊ တောင်က မတ်တော့ နှစ်ယောက်အလေးချိန်နဲ့ ဆိုင်ကယ်ကိုမထိန်းနိုင်မှာစိုးလို့” ဤသို့ပြောပြီးနောက် crystal တစ်ယောက်တည်း တောတောင်ထဲမှာ မျက်စိသူငယ်လေးဖြင့် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ အစ်မလည်း လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုပြီး ပြောရင်လည်း အခြေအနေက မပေး၊ ကဲ မထူးပါဘူးလေ တောထဲတောင်ထဲမှာ ရှိကြကုန်သော သတ္တဝါအပေါင်းတို့ကို မျက်စိလေးမှိတ်ပြီး အာရုံပြု မေတ္တာပို့ပါတော့တယ်၊ ပြုခဲ့ဖူးသော ကုသိုလ်များကို အားလုံးကြားကြားသမျှ အမျှရကြပါစေကြောင်း အမျှပေးဝေ၊ နားစွင့်လိုက်တော့ ဆိုင်ကယ်သံကလည်း တစတစ ဝေး၍ သွားချေပြီ။ ပတ်ဝန်းကျင်က တိတ်ဆိတ်မှုက ခြောက်ခြားစရာ။ မေတ္တာပို့ပြီး မျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်မိတော့ ကိုယ့်ရှေ့မှာ ပွင့်တူရွက်တူပန်းအနီရောင်လေးထံ မျက်စိရောက်သွားပါတယ်။ ပန်းလေးက လက်ဝါးကတ်တိုင်မှာ ချည်ထားတာပါလား။ ပန်းက လက်ဆတ်နေသေးတယ်၊ နောက် မျက်လုံးကို နဲနဲ အလုပ်ပေးလိုက်တယ်၊ အမယ်လေး ပျော်လိုက်တာ သချိုင်း သချိုင်းတွေ့ပြီ ဒါဆို ရွာရှိပြီပေါ့၊ သချိုင်းဆိုတာ ရွာရဲ့ အနောက်ဘက်မှာ ထားတတ်ကြတာမို့ ကျမရောက်နေတဲ့အရပ်ဟာ ရွာရဲ့ အနောက်ဘက်ကို ရောက်နေတာဆိုတော့ အရှေ့ဘက်မှာ ရွာရှိရပါမယ်၊ ပန်းက လန်းနေသေးတော့ ရွာက အနီးအနားမှာပဲ ရှိမှာ သေချာနေပြီဆိုတာ သိလိုက်ရပါတယ်။ ရှေ့နားကို နဲနဲလေးတိုးပြီး သစ်ပင် သစ်ရွက်တွေကြားက လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ အဝေးတစ်နေရာက မီးခိုးတလူလူထွက်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ခွေးဟောင်သံ တချက်တချက် ကြားနေရတယ်။ ဒါဆို သေချာပြီ။ ခမ်းရေ အမြန်သာ ပြန်လာပါတော့လို့ တိုးတိုးရေရွတ်မိလိုက်တယ်။ နာရီဝက်လောက် ကြာတဲ့အခါ ခမ်းရဲ့ ဆိုင်ကယ်သံကို စကြားရပါတယ်၊ ခမ်းရဲ့ ဆိုင်ကယ်သံဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းမိသေး။ ဆိုင်ကယ်သံ နီးလာတော့မှ ခမ်းရဲ့ ဆိုင်ကယ်သံမှန်း သေချာသွားတာမို့ အားတက်ဝမ်းသာနိုင်တော့တယ်။ ခမ်းရောက်လာပြီး ရွာကို သွားဖို့ လမ်းရှာကြရပြန်ပါတယ်။ လမ်းပေါက်က ဆိုင်ကယ်သွားနေကြ လမ်းပေါ် သစ်ကိုင်းကျိုးကျနေတော့ သစ်ရွက်၊ သစ်ပင်တွေနဲ့ ပြည့်ပြီး လမ်းမရှိဘူးလို့ ထင်ရတာကြောင့် လမ်းမတွေ့တာဖြစ်နေတာ။ ဒါနဲ့ ရွာထဲလမ်းကို ဆိုင်ကယ်ဆက်ပြီး မောင်းနှင်လာတော့ ရွာကို တွေ့ပါပြီ။ နေ့လည်ပိုင်းဆိုတော့ လယ်စိုက်သွားကြ၊ တောင်ယာအလုပ်များကို လုပ်ကိုင်ကြတာကြောင့် ရွာထဲမှာလူရှင်းနေပါတယ်။ ကလေးတွေ၊ ခွေးလေးတွေနဲ့ အသက်ကြီးပိုင်းတချို့သာတွေ့ရပါတယ်။ ရွာက အိမ်ကိုးလုံးပဲရှိပြီး ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတစ်ခုနဲ့ လူသားချင်းစာနာကူညီသော အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ ရုံးအဆောင်အအုံငယ်လေးကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ရွာက လူတွေကို တွေ့နိုင်မယ့် ရက်ကို မေးခဲ့ပြီး ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။ အပြန်လမ်းတောင်ဆင်းမှာတော့ တထိတ်ထိတ်မဖြစ်တော့ပါဘူး။ လမ်းသိသွားပြီကိုးနော်။ တောင်ပေါ်က ဆင်းတော့ မှောင်ရီစပျိုးနေပြီ၊ ကားလမ်းမပေါ်မှာ ဆိုင်ကယ်အရှိန်မြှင့်မောင်းလာခဲ့ကြပါတယ်။ ဖြည်းဖြည်းမောင်းလို့လဲ မပြောဖြစ်ခဲ့ဘူး ရုံးက လူတွေ နောက်ကျလို့ စိတ်ပူနေလောက်ပြီလို့ စိုးရိမ်ပြီး အရှိန်နဲ့ မောင်းလာခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်နေရာအရောက် ကြက်သားအုပ်တစ်စု ကားလမ်းကို ပြေးဖြတ်ကူးကြတယ်၊ ကားတွေဘက်က လွတ်လာပေမယ့် ကျမတို့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ မလွတ်ပဲ ကြက်အော်သံ၊ ဆိုင်ကယ်သံနဲ့ လူအော်သံတွေ ဆူညံသွားတော့တယ်။ အရှိန်ကို ထိန်းရင် ဆိုင်ကယ်မှောက်မယ်၊ လူကို ကာကွယ်ရတော့၊ အင်းးးးးးး ကြက်လေးတွေကိုသာ မေတ္တာပို့လိုက်ရပါတော့တယ်။
ကျိုင်းတုံမြို့ထဲကို စဝင်လာတော့ မြေလမ်းလေးအတိုင်း တစ်ခါ မောင်းရသေးတယ်၊ ရှေ့မှာ စေတီတစ်ဆူပါလား၊ ဥာဏ်တော် သိပ်မမြင့်လှပေ။ ခမ်းကပြောတယ် “အစ်မ ဒီဘုရားက ထူးခြားတယ်”၊ “ဟုတ်လား ဘာတွေ ထူးခြားလဲ ပြောပါအုံး၊ သူက မှားလို့မရဘူး”။ “အယ် ဘယ်လိုမှားလို့မရတာလဲ” ကျမက မေးနေတုန်းရှိသေး......၊
ဘယ်က ဘယ်လိုဖြစ်တယ် မသိ ဆိုင်ကယ်စလစ်ဖြစ်သွားလိုက်တာ ဆိုင်ကယ်က ကျမတို့နှစ်ယောက်ကို ဘေးဒရွတ်တိုက်ဆွဲသွားပါတော့တယ်၊ သိပ်ဝေးဝေးဆွဲမသွားလို့ တော်သေးတယ်။ ဆိုင်ကယ်အောက်မှာ ခမ်းက ပိလို့၊ ခမ်းအပေါ်မှာ ကျမနဲ့ ဆိုင်ကယ်က ပိနေပါတယ်။ ဖြစ်ပျက်သွားတာက ချက်ချင်းမို့ ကျမလည်း ယောင်နနနဲ့။ ကိုယ့်ဖာသာ မနဲကုန်းထ၊ ခမ်းကိုလည်း တဖွဖွခေါ်လို့။ ခမ်းဆီက အသံမကြားရတော့ ကျမလန့်လိုက်ရတာ၊ နောက်မှ ဆိုင်ကယ်ကို မနိုင်တနိုင်မဖယ်၊ အနားမှာ ရှမ်းလူမျိုးအမျိုးသားတစ်ယောက်က အပြေးလာပြီး ခမ်း ကိုယ်ပေါ်ပိနေတဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို ဝိုင်းဖယ်ပေး၊ ခမ်းကို ကျမ လှုပ်ပြီး ထူ၊ ခမ်းက သူနာနေလို့ အသံမထွက်နိုင်၊ အမယ်လေး တော်ပါသေးရဲ့၊ ခမ်းကတော့ အစ်မ ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုပြီး သူနာနေတာကို ဂရုမစိုက်အားဘူး၊ ကျမကို စိုးရိမ်တကြီး မေးရှာပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်ဦးထုပ်တွေကလည်း မေးသိုင်းကြိုးတွေက ချောင်နေတော့ လွှင့်ထွက်ကုန်လေပြီ။ ကံက ကောင်းချင်တော့ ခေါင်းနဲ့ မရိုက်မိ။ ဆိုင်ကယ်ကို ဝိုင်းထူပေးသောသူကလည်း စကားပင်လှည့်မပြော ထွက်သွားလေတော့သည်။
ခမ်းတစ်ယောက် နာနေတဲ့ ကြားက တဟားဟားရယ်နေပြီး၊ “အစ်မရေ ထူးခြားတာ ဘာလဲဆိုတာ သိပြီလား၊ လမ်းမှာ ကြက်လေးကို သေချင်လို့ လမ်းဖြတ်ကူးတာလားမသိဘူးလို့ စိတ်ထဲက ဖြစ်လိုက်တော့ အခု ဆိုင်ကယ်မှောက်ပြီး သူခြေထောက်နာရပြီတဲ့။ သူကြက်လေးကို တိုက်မိပြီး လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ကြက်လေး ခြေတစ်ဖက် နာသွားတာတွေ့လိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့် အခုသူပြန်ခံရတာ”လို့ ပြောရှာပါတယ်။ “အော် အစွဲမထားပါနဲ့ ခမ်းရယ်၊ ကဲ ဆိုင်ကယ်ကို ကြည့်အုံး၊ သွားလို့ရသေးရဲ့လား”လို့ ဆိုင်ကယ်လည်း တော်တော်လေး ထိသွားလေသည်။ သို့သော်လဲ မောင်းလို့တော့ ရသေးတဲ့အတွက် ရုံးသို့ ဖြောင့်တန်းစွာရောက်ခဲ့ပါသည်။
ရုံးရောက်တော့ စိတ်ပူနေကြသော ရုံးအဖွဲ့သားများက ကျမတို့ကို ရှာဖို့ပင် တိုင်ပင်စုစည်းနေကြပြီ၊ နှစ်ယောက်သား စကားပင် မပြောနိုင်၊ ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်မှုတွေအပြင် ထိတ်လန့်မှုမျိုးစုံတို့အကြောင်းတွေကို ဘယ်က စပြောရမှာပါလိမ့်...
Posted by Crystal at 10:58 AM5comments
တောင်စဉ် အထပ်ထပ်တွေက ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ သဘာဝအလှတရားများဖြစ်ပါတယ်။
(ဓာတ်ပုံများကို မနိုင်းနိုင်းစနေမှ ကူညီပေးပို့ပါသည်)
ပြီးခဲ့တဲ့လက ဧည့်သည်များကို ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ပတ္တရားကမ်းခြေကို လိုက်ပို့တော့ ကမ်းခြေနားက တောင်တန်းတွေကို ဆိုင်ကယ်နဲ့ သွားရင်း Adventure Trip ကို ခံစားကြသတဲ့။ တောင်တန်းတွေပေါ်ကို စွန့်စွန့်စားစား ဆိုင်ကယ်တွေစီးရင်း အပန်းဖြေကြသတဲ့လား၊ ကျမမှာတော့ အတိတ်ဆီက မောမြေတောင်တန်းတွေပေါ်မှာ သဲထိတ်ရင်ဖို တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်များကို မျက်စိထဲမှာ တရေးရေး မြင်ယောင်မိရင်း အတိတ်ဆီကို အတွေးတို့က ခရီးနှင်နေမိပါတော့တယ်.....
မဝေးသေးတဲ့ နှစ်တစ်ခုက တောင်တန်းတွေနဲ့ သာယာလှပတဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်ကို ကျန်းမာရေးတာဝန်တွေနဲ့ ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှ ဝန်ထမ်းများက ဦးဆောင်လို့ ဒေသခံဝန်ထမ်းများ အကူအညီနဲ့ နိုင်ငံသားတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာများကို စွန့်စွန့်စားစား ဆောင်ရွက်ခဲ့တာ အခုဆိုရင် သုံးနှစ်တောင် ပြည့်ခဲ့ပြီ။ ကျမတို့ အနေနဲ့ ကျန်းမာရေးတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရန် ဒေသတွေခွဲ၊ တာဝန်တွေ ခွဲယူကြရပါတယ်။ ကျမတာဝန်ကျရာ ကျေးလက်ဒေသတွေအားလုံးက တောင်ပေါ်ဒေသတွေချည်းပါပဲ။ ဒေသခံ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ ယောက်ျားလေး ဝန်ထမ်းနှစ်ဦး အားဖြည့်လို့ ကျမတို့ တောင်ပေါ်ဒေသဆီသို့ ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပထမနှစ်ရက်က ဒေသတွေရဲ့ လမ်းကြောင်းကြည့်ဖို့ဖြစ်ပြီး၊ ကျန်ရက်များမှာတော့ ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေ ဆောင်ရွက်ရန် စီစဉ်စွဲထားပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ တစ်ရက်မှာ ဒေသခံဝန်ထမ်း ရှမ်းမလေး “ခမ်း”နဲ့ကျမက ဆိုင်ကယ်တစ်စီး၊ ယောက်ျားနှစ်ယောက်က ဆိုင်ကယ်တစ်စီး ခွဲလိုက်ကြပြီး ရွာနှစ်ရွာကို ခွဲဝင်ပါတယ်။ ခမ်းနဲ့ကျမတို့ သွားတဲ့တောင်ပေါ်က မနက်စောစော မိုးရွာထားတာကြောင့် တောင်က ချော်နေပါတယ်၊ မြေပြန့်က စတက်တဲ့လှမ်းမှာပင် ဆိုင်ကယ်က နောက်ပြန် ချော်ကျလိုက်တာ နောက်က ကျမက ခြေထောက်နဲ့ လှမ်းထောက်ပြီးထိန်းလိုက်တဲ့အခါမှ ဆက်ချော်မကျပဲ ခမ်း ကလည်း ဆိုင်ကယ်ကို ထိန်းလိုက်နိုင်ပါတယ်၊ ပထမဆုံး ရင်တုန်မှု ရင်ခုန်မှုပေါ့။
ဒါနဲ့ ကျမလည်း ခြေချင်လျှောက်လိုက် ဆိုင်ကယ်နဲ့တက်လိုက်နဲ့ တောင်ထိပ်ကို ရောက်သွားတယ်ဆိုပါစို့။ လမ်းမှာတော့ အမောစို့တဲ့နေရာတွေ ရှိသလို၊ မိုးနဲ့ ဆောင်းအကူး ရာသီရဲ့ အေးတဲ့ဒဏ်ကို ရန်ကုန်ကလာတဲ့ crystal တစ်ယောက် ကြံ့ကြံ့ခံရင်း အံကြိတ်နေရပါတယ်။ တောင်ထိပ်ရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲ တောင်တွေကြားမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးနေကြတဲ့ တိုင်းရင်းသူလေးတွေကို ကျမတို့ တာဝန်ယူရမည့် ရွာဟုတ်မဟုတ် ခမ်းက ရှမ်းတိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားနဲ့ လှမ်းမေးပါတယ်။ ရွာထဲက လယ်စိုက်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသူလေးက “နင် ဘာတွေပြောနေတာလဲဝေးးးး ငါနားမလည်ပါလား”တဲ့။ ဗမာစကားနဲ့ ထပ်မေးတော့ ဟိုဘက်က နားလည်သွားတယ်။ “ဒီတိုင်းရင်းသူက အခြားနေရာက ဒီကို ရောက်လာတဲ့ တိုင်းရင်းသူဖြစ်မယ်တဲ့၊ အချို့ ကရင်နဲ့ ကယားတွေလည်း ဒီဘက်ကို တာဝန်ကျရင်း ဒီဘက်မှာ အိမ်ထောင်ကျလို့ နေဖြစ်သွားတာတွေလည်း ရှိပါတယ် အစ်မ”လို့ ခမ်းက ရှင်းပြတယ်။ နယ်ခံတိုင်းရင်းသူလေးကို ကျမတို့ သွားလိုရာ ရွာကို ထပ်မေးကြည့်တော့ တော်တော်လိုသေးကြောင်း ဒီတောင်ကနေ လှမ်းကြည့်ရင် အမြင့်ဆုံးတောင်ထဲမှာ ဖြစ်ကြောင်း ဒီလမ်းကပဲ ဆက်သွားပါလျှင် အဆင်ပြေပါကြောင်း၊ တောင်များက ဆက်နေတာကြောင့် သွားလို့ရကြောင်း လမ်းညွှန်ပေးပါတယ်။
ခမ်းနဲ့ကျမလည်း တောင်ကို မျှော်ကြည့်မိရင်း ဘုရားတမိကြသေးတယ်။ ယောက်ျားလေးတွေကို ပြန်ခေါ်ရင်ကောင်းမလားလို့ တွေးမိတော့ မဖြစ်ဘူး အချိန်က နေ့လည်ကို ရောက်နေပြီ အချိန်သိပ်မရတော့ အားတင်းပြီး ရှေ့ဆက်ဖို့သာရှိပါတယ်။ ခမ်းက “အစ်မ လိုက်ရဲလား၊ အစ်မ သွားမယ်ဆိုရင် သူလိုက်ပို့ပါမယ်လို့ ပြောပါတယ်”ကျမလည်း သက်ပြင်းကို ချရင်း သွားကြမယ်ဆိုပြီး ဆက်ထွက်ခဲ့ကြတယ်။
နေပူလာပြီဖြစ်လို့ တောင်စတက်တုန်းကလိုတော့ ချော်ကျခြင်းမဖြစ်တော့ပေမယ့် တောင်ကြားတွေထဲက ဆိုင်ကယ်နဲ့သွားရတာဆိုတော့ ဆိုင်ကယ်သွားတဲ့လမ်းလေးက တောင်ကမ်းပါးမှာ လက်နှစ်အုပ်စာ သာသာလေးတွေပဲ ရှိတာမို့၊ ဘုရားစာရွတ်ရင်း သတိအနေအထားနဲ့ ချောက်ထဲကျရင် ဘယ်အပင်ကို လှမ်းဆွဲရမယ်ဆိုတာပါ ကြည့်နေရပါတယ်၊ သဲထိတ်ရင်ဖိုစွာနှင့်။
နောက်ထပ် (၂)နာရီခန့် သွားပြီးနောက် တိုင်းရင်းသူလေးပြောတဲ့ နေရာလိုလိုတွေ့သော်လည်း တောထဲ တောင်ထဲမှာ ရွာပျောက်နေပါတယ်။ ကျမတို့ မျက်စိလည် လမ်းမှားသွားပြီလား...........။
ကျိုင်းတုံမှာ အလုပ်ကိစ္စနဲ့သွားတုန်းက အကြောင်းလေးတွေ ရေးချင်လို့ ကျိုင်းတုံရဲ့ တောင်တန်းများ ပုံလေးတွေ လိုချင်ပါတယ်ရှင်။
ရောက်ခဲ့စဉ်က အကြောင်းအကြောင်းများကြောင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။
နောက် တောင်ကြီးပြန်လမ်းတစ်လျှောက်က ပုံတွေတော့ရှိတယ်
ပို့စ်ရေးပို့လိုက်လေ.. လိုအပ်တဲ့ ပုံတွေကို ရှာပြီးထည့်ပေးလိုက်မယ်း)
အခါလူမျိုးတွေနဲ့ တွေ့ခဲ့တဲ့ အကြောင်းလေး ရေးချင်လို့ပါ။
လောလောဆယ်က ပိုစ့်ကို ရာထားတုန်းပဲရှိသေးတယ်။
တကူးတက ကူညီလို့ ကျေးဇူးပါနော်။
တာချီလိတ်ကနေ တောင်ကြီးကို ပြန်လာတုန်းက ရိုက်ခဲ့တာ
ကားပေါ်က လှမ်းလှမ်းရိုက်တယ်ဆိုတော့ ပုံတွေက ထင်သလောက် မကောင်းဘူးး)
ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်နော်၊ ပုံလေးတွေက အဆင်ပြေပါတယ်။
သဘာဝပုံလေးတွေမို့ ပိုတောင် ကောင်းပါသေးတယ်ရှင်။
ပုံတွေမြင်တော့ တော်တော်လွမ်းသွားတယ် တောင်တန်းတွေကိုပါ :P
Posted by Crystal at 2:31 PM4comments